Discount ho an'ny mpianatra amin'ny fahitalavitra Sling (2020) - Ahoana ny fomba fampiharana? - Fialam-Boly
Ahoana ny fomba ahazoana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra amin'ny fahitalavitra Sling?
Sling TV dia sehatra tsara indrindra ho an'ireo izay te hahazo fialamboly mora vidy. Mpampiasa vaovao maro no mitady sehatra iray manontolo amin'ny antony maro samihafa. Ny Sling TV dia fomba tsara hanatsarana ny fanangonana anao. Tsy mora velively ny nijery ny fahitalavitra LIVE. Sling TV dia manolotra drafitra mora vidy mora idirana ianao.
Afaka mahazo tombony tena tsara ny mpampiasa. Amin'ny maha mpianatra anao, mety ho sarotra ny mandoa famandrihana betsaka. Amin'ity torolàlana ity dia hasehontsika ny fomba ahafahanao manangona vola amin'ny fandanianao.
Manana drafitra fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ve ny Sling TV?
Ny Sling TV dia tsy manome drafitra fihenam-bidy ho an'ny mpampiasa ho an'ny mpampiasa. Sarotra aminao ny mahita drafitra mora vidy amin'ny Internet. Ny Sling TV kosa dia mitondra tolotra tsara. Hanampy ny fividiananao izany. Ireo mpampiasa dia afaka miaina traikefa tsy misy tohiny ary mankafy atiny misy kalitao.
Ianao dia hahazo endri-javatra premium amin'ny tombony tombony. Amin'ny maha-mpianatra antsika dia te-hanangona vola daholo isika rehetra. Io no akaiky indrindra amin'ny fizarana ireo fitaovanao mahatalanjona. Manoro hevitra anao izahay mba hanandramanao anio.
10+ Serivisy fandefasana fahitalavitra tsara indrindra
Hulu vs Sling TV - Iza no tsara indrindra?
Dingana hisoratra anarana amin'ny Sling TV:
Ny Sling TV Platform dia tsy mitaky anao hanao zavatra betsaka amin'ny fisoratana anarana. Afaka mamorona kaonty mora foana ianao ary mankafy ny serivisin'izy ireo tena tsara. Ireto ny dingana hanombohana amin'ny fizotrany.
Afaka manandrana ny sehatra mandritra ny telo andro ireo mpampiasa nefa tsy andoavany vola mihitsy. Ny sehatra dia manohana ireo fantsona ambony rehetra. Azonao atao ny mitsidika ny pejy fandraisana Eto .Tsindrio ny bokotra fisoratana anarana hanombohana ny fizotrany.
Afaka manomboka ny mpampiasa amin'ny famoronana kaontiny. Mila misoratra anarana amin'ny kaonty mailakao ianao. Ny mpampiasa dia afaka mamorona teny miafina azo antoka ihany koa.Manoro hevitra izahay ny hampiasa fitambarana tranga, isa ary litera manokana. Hanome anao fiarovana ambony indrindra amin'ny Internet izany.
Manolotra drafitra maro ho an'ny mpampiasa ny Sling TV amin'izao fotoana izao. Misy drafitra telo azo alaina ao amin'ny tranonkala.Afaka mahita fitomboana be amin'ny lisitry ny fialam-boly amin'ity tranonkala ity ianao. Ny mpampiasa dia afaka misafidy lisitra fantsona 30+, 45, ary 50+. Ireo mpampiasa dia afaka mampiditra addon vitsivitsy ihany koa hahazoana ny ambony indrindrafantsona.
Ny dingana farany dia ny fampiasana ny vavahady fandoavambola. Ny mpampiasa dia afaka mandoa ny fandoavam-bola amin'ny sehatra ary manomboka mankafy ny serivisy eo noho eo. Ny Sling TV dia ahafahanao mandoa amin'ny carte de crédit na Paypal. Izy ireo dia fomba mavitrika manamarina ny fitsarana anao mandritra ny telo andro. Hesorina indray mandeha ny vola aorian'ny fotoam-pitsarana.
Ireo no dingana hanombohana mankafy fialamboly tsy misy fetra amin'ny alàlan'ny tranonkala premium. Afaka manandrana azy ireo androany ireo mpampiasa ary mahazo traikefa tsara hijerena.
Fifanarahana amin'ny Sling TV:
Ny Sling TV dia tsy manana fihenam-bidy mahafinaritra ho an'ny mpianatra. Izy ireo, na izany aza, dia manana fifanarahana marobe ho anao. Ireto no tena hahazoanao tombony lehibe.
1. Makà mini TV AIR maimaimpoana
Ny fitaovana Air TV mini dia fanampiny tsara amin'ny fanamboarana tranonao. Azonao atao ny manao ny fahita lavitra fahita lavitra amin'ny alàlan'io safidy io. Manamora ny fandefasana atiny na aiza na aiza ao an-tranonao. Ny fifandraisana Internet dia mahatonga ny zavatra ho somary tsotra ihany koa.
Afaka mivezivezy amin'ny kalitao 4K miavaka amin'ny fahitalavitra ny mpampiasa. Manome anao fidirana an-tokana mankany amin'i Sling sy i Netflix amin'ny fitaovanao. Mila mandoa ny fandoavana roa volana mialoha ny mpampiasa.
2. Afaka mahazo $ 10 amin'ny Sling sy Showtime, Starz ary EPIX ianao
Ny tranonkala dia misy fampiroboroboana mitohy ankehitriny, izay manome fihenam-bidy lehibe. Afaka mahazo $ 10 amin'ny famandrihanao amin'ny antsamotady ianao. Mahazo serivisy fanampiny toa izany koa ny mpampiasa Fotoana fampisehoana , Starz, ary Epix maimaim-poana. Haharitra iray volana izany.
Mahazo fantsona 50+ sy kalitao miavaka ianao amin'ny streaming. Ankafizin'ny mpampiasa ihany koa ny sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahita lavitra amin'ny fangatahana.
3. Fandefasana maimaim-poana
Manolotra koa i Sling a streaming maimaim-poana safidy ho an'ny mpampiasa. Izy io dia mety indrindra ho an'ireo izay tsy afaka mandany betsaka amin'ny safidin'ny fahitalavitra mivantana. Voafetra ihany ny fantsona misy amin'ity sehatra ity. Ireo mpampiasa dia afaka mankafy fiasa manokana amin'ny fividianana drafitra nataon'i fipihana eto.
Manana safidy hafa ny Sling TV, ary ao amin'ity torolàlana ity dia manandrana mamaly ny fanontanianao rehetra izahay. Tsy dia misy fihenam-bidy ho an'ny mpianatra ao amin'ilay tranonkala. Azonao atao ny mampiasa ny fifampiraharahana hampihenana ny fandaniana amin'ny fividianana.
Brittney Griner Net Worth - Taona, Asa, Fiainana tany am-boalohany & More!
Inona no fantatrao momba ny Masoandro mifanohitra amin'ny vanim-potoana faha-3?
sarimihetsika manga mijery Internet maimaim-poana
sarimihetsika mivantana maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana
ny fomba nanipy varavarankely teo chromecast
Fampiharana mandritra ny androm-piainany ho an'ny fahitalavitra samsung smart
kaody mivantana xbox mivantana 2015 tsy misy fanadihadiana
sarimihetsika maimaim-poana maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana